Wararka - 3D farshaxanka birta ah (2)
Sawirka gidaarka birta
3D farshaxanka darbiga biraha (2)
Farshaxanka gidaarka birta aluminium caday ayaa aad u sii kordheysa, dad badana waxay go'aansadeen inay ku cusbooneysiiyaan qolkooda cuntada, qolalka fadhiga, iwm.
Xitaa ma qiyaasi kartid inta waxyaalood oo qabow laga samayn karo aluminium. Waxay noqon kartaa qurxin yar ama farshaxan weyn oo derbi ah, oo daboolaya gidaarka oo dhan. Intaa waxaa dheer, walxaha aluminiumku waa aalado caalami ah oo loogu talagalay qurxinta derbiga maadaama ay ku habboon yihiin qol kasta iyo sidoo kale qorshe kasta oo midab leh. Runtii waa wax fiican in wax la heloFarsamooyinka darbiga birta ah ee 3Ddarbiga ka samaysan aluminium saafi ah, maxaa yeelay wuxuu u eg yahay dhalaalaya iyo marka si sax ah loo sameeyo. Qeyb ka mid ah farshaxanka darbiga ayaa gebi ahaanba beddeli kara jawiga iyo jawiga qolka aad qorsheyneyso inaad tan dhigato.
Dalabkeenna, waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay, noocyo kala duwan oo ah Farshaxanka birta ah ee 3D iyo dhowr qaab, markaa qof kastaa wuxuu helayaa wax adiga kugu habboon.
Dhammaan farsamooyinka derbiga birteennu way fududahay in la rakibo waana kuwo waara. Waxa ugu fiican ayaa ah inay si fiican ugu habboon yihiin qol kasta oo aad rabto.Waxay ku daraan qaab habboon oo u dhigma niyaddaada ama naqshadeynta aad doorbideyso. Tan iyo, maalinba maalinta ka dambaysa farshaxanka darbiga biraha ayaa aad u soo kordheysa, waqti ha iskaga lumin, oo aad u socoto inaad ka soo xusho qaar ka mid ah boggeena internetka.
Waqtiga boostada: Abriil-29-2021
Qurxinta guriga ee qurxoon waa soosaarahii ugu horreeyay ee xirfadle ah ee 3D rinjiyeynta saliidda birta ee Shiinaha oo leh tayada ugu fiican waqtiga oo dhan.Waad naga aamini kartaa oo waxaad aaminsanaan kartaa sawiradeena gaarka ah iyo hal-abuurnimada inay kuu keeni karto guul weyn!